परफ्युम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी ५ कारण बन्छ खतरा ! - News Bihani
परफ्युम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी ५ कारण बन्छ खतरा !
बिहिवार, आश्विन २२ २०७७
परफ्युमको प्रयोगले व्यक्तित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तर कतिपय अवस्थामा भने यसको गलत प्रयोगले स्वास्थ्यमा हानि पुग्न सक्छ । परफ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गला जस्ता शरीरका अंगमा लगाए यसले हानि पुर्याउँछ ।
शरीरका संवेदशील अंगमा केमिकलयुक्त परफ्युम प्रयोग गर्नु खतरनाक सावित हुनसक्छ । तसर्थ निम्न अवस्थामा परफ्युमको प्रयोग गर्दा सर्तक रहनुहोला ।
४. नुहाएपछि शरीर पुछेर परफ्युमको प्रयोग गर्नु होला । यदि लामो समयसम्म परफ्युम रहोस् भन्ने चाहाना भए तातो पानीले नुहाउनुहोस् । यसले छालाका छिद्र खुलाउँछ । र त्यसपछि परफ्युम प्रयोग गर्दा लामोसमयसम्म पसिना गन्हाउने समस्याको समाधान हुन्छ ।
बिहिवार, आश्विन २२ २०७७०८:५३:४७